Cajiib ah oo dhakhso leh, Miisaan fudud, Browser Web xayeysiinta Ad. | Androidsis
Dhammaan kuwa raadinaya daalacashada shabakadaha beddelka ah ee kuwa ugu wada fiican loo yaqaan, sida Chrome, Firefox ama Opera, waad nasiib badan tahay tan iyo maanta waxaan kuu keenayaa degel fudud oo deg deg ah, shabakad iftiin leh meesha ay jirto, oo leh xayeysiis xayeysiis iyo hawlo badan oo wanaagsan iyo xulashooyinka qaabeynta oo lagu daray.
Un furan web browser, taas oo ay ugu mahadcelinayaan horumariyeyaasha madaxbannaan iyaga oo aan lahayn nooc faa'iido ah, maanta waxaad awoodi doontaa inaad soo dejiso oo aad ku rakibto qalabkaaga gabi ahaanba bilaashka ah ee bilaashka ah iyada oo shuruudaha kaliya ee ah inaad haysato terminal leh nooca loo yaqaan "Android Lollipop" ama noocyo ka sarreeya.
Xilligan la joogo Bog furaha shabakadda oo shaqsiyan si buuxda iigu haya jacayl, iyadoo loo marayo habka loo yaqaan 'Web browser' ee ka jawaaba magaca F Browser F | L | OSS, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso oo aad gacanta ku rakibto maadaama hadda aan laga heli karin Google Play Store, in kastoo aan awoodno toos ugala soo deg APK adoo gujinaya xiriiriyahan kaas oo si toos ah kuu geyn doona bogga Github ee mashruuca oo horeyba ugu jiray nooca 5.6.
Haddii aad isticmaaleysid bulshada Androidsis ee Telegram, halkaas waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad ka hesho toos u soo dejiso ugu dambeysay apk ee xiisaha leh e dhakhso layaableh, biraawsar web fudayd leh adblocker iyo waxyaabo kaloo badan.
Wax kasta oo F | L | OSS Browser na siiso
Isaga mooyee xawaare aad u weyn oo ku saabsan rarida bogagga iyo marin haynta, bog furaha shabakadan cajiibka ahi wuxuu u taagan yahay fudeydkiisa xad dhaafka ah ee ku wajahan noo soo bandhig khibrad daalacasho ah oo aan lahayn xayeysiis iyo xulashooyinka qaabeynta iyo shaqeynta sida xiisaha u leh kuwa aan hoos ku taxo:
Is-dhexgalka adeegsadaha yar-yar ee shaqadoodu ka badan tahay naqshadeynta.
Awood aad ku darto waxyaabaha ugu cadcad shaashadda guriga.
AddBlocker awood leh, (xayeysiiyaha xayeysiiska).
Wadaagista xulashooyinka si loo muujiyo suurtagalnimada la wadaag adigoon keydin shaashadda bogga oo dhan in aan booqanayno.
Suurtagalnimada keydi shaashadaha shabakadaha oo buuxa si qeexan.
Suurtagalnimada keydinta aqoonsiyada bogagga shabakadda ee xiisaha noo leh.
Dejinta si aad u baadho goobta.
Dejinta si qaab shaqsi ahaaneed loogu qaabeeyo wax kasta oo la rari doono markii la furayo bog: sawirro, taariikh, Kukiyada….
Xarunta xakamaynta xogta si aad ugu tirtirto qaab aad u fudud kaydka, taariikhda, calaamadaha, cookies-ka….
Awood u leh inuu beddelo mashiinka raadinta asalka ah: Google, DuckDuckGo, StartPage Bing iyo Baidu.
Suurtagalnimada in loo sahlo qaabka mobilada ama qaabka desktop ama Desktop ahaan ugu talagal ahaan.
Awood u leh beddelka cabbirka font
Fursadaha qaabeynta oo ay ka mid yihiin mawduuc fudud iyo mugdi ama ikhtiyaarro ku saabsan waxa la sameeyo marka laga baxayo biraawsarka.
Ikhtiyaar si aad u abuurto oo aad u kaydiso Dib-u-habeyn dhammaystiran oo ah nidaamyada biraawsarka iyo calaamadaha.
Deg Deg shabakad fudud oo fudud oo ogolaata xannibo xayeysiinta android-ka oo aan xidid lahayn taas oo ah, fiidiyowga aan kaaga tagay bilowga qoraalkan, waxaan ku tusayaa marka lagu daro sida loo soo dejisto oo loogu rakibo barnaamijkeenna 'Android', waxaan sidoo kale si faahfaahsan kuugu tusayaa dhammaan qaabkeeda iyo halka laga helayo dheeri ah muuqaalada in badan oo aad iyo aad u xiiso badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Cajiib, fudeyd, deg deg ah, shabakad xayeysiis xayeysiin leh astaamo qabow badan
Waxaan u adeegsaday si aan u arko websaydhkaaga oo haa, waxay xannibtaa xayeysiiska. Xiiso leh Shaqsi ahaan baloog leh, waa inaan sheegaa inaan diido inaad xayeysiiso noocan ah biraawsar ee aan ahayn inay ku siinayaan ikhtiyaar, si toos ah uma xayiraan ishayada ugu weyn ee daqliga. Weyn Waxaan rajaynayaa inaad akhrido qodobkan waxyar ka badan maxaa yeelay maadada way adagtahay in lagu dhiiri galiyo dadka inay xanibaan xayeysiinta Dhamaan wanaag
Ku jawaab Androidalmando
Waa hagaag, waxay ila tahay wax weyn aniga, inaan xannibi karno xayeysiisyada, hadba sida ay u badan tahay, Websaydhyada qaarkood waxay noqdaan kuwo aan la cabi karin, iyadoo aan laga hadlin pop-up-ka. Waan sameeyaa waana sii wadi doonaa inaan sameeyo, waana ugu mahadnaqayaa Androidsis gacan ka geysigan.
Waan soo degsaday biraawsarka laakiin fikrad kama haysto haddii aan u habeyn karo si aan u akhriyo goobaha Isbaanishka, maaddaama ay ku timaaddo Ingiriis oo aanan fahmin oo aanan ku hadlin, haddii aad ikhtiyaarkaas leedahay, waan ku faraxsanahay haddii aad waan ogahay sida loo dhigo isbaanishka.
Jawaab Jose Ignacio
Waan rakibay waxayna umuuqataa ikhtiyaar xiiso leh. Waan tijaabin doonaa si aan u arko sida ay wax u socdaan.
Hadday taasi ila fiicantahay. Laakiin xalka ma ahan inaad indhaha ka daboosho markaad aragto in qof uu ku siinayo caano, taas oo asal ahaan ah waxa aad ku sameysid shaashadda qorraxda. Xalku waa in la xannibo ama aan la booqan boggaas. Laakiin haye, waxaa laga yaabaa inaad u maleyneyso in shabakadaha ay hawada ka maqnaanayaan. Markuu qof kastaa adeegsado xannibaadayaal oo ay jiraan afar degel oo hadhay, markaa waxaad weydiisanaysaa waxyaabo kala duwan
Waan tijaabinayaa oo waxay umuuqataa mid xiiso badan. Laakiin ma aniga baa aniga, mise sawirada bogagga aan booqaneyno lama keydin karo? Ma jiraa qof og in sawirada la badbaadin karo iyo sidee?
Waxba ma aqaano laakiin anaa kaa aqoon badan dijo
Kuwo diida codsigan. Aan aragno haddii aan eegno wixii aan rakibnay ka hor intaanan hadlin. Ka eeg goobaha oo waxaad arki doontaa sida aad u samayn karto liisaska cad ee adblock, buskudyada iyo bogagga internetka. Aan aragno haddii aan raadineyno qaabab kale oo maalgelin ah, in xayeysiinta ay xad dhaaf tahay. Haddii aan jeclaado waxa ku jira bog laakiin ay ka dhigaan kuwo aan u qalmin in la daawado, Waxaan xirayaa waxa ka haray oo aan u oggolaado hal-abuurka inay muujiyaan fikraddooda iyadoon xaddidneyn xayeysiinta.
Jawaab Anigu garan maayo WaxbaLaakiin Waan ogahayMarbadanThanYou